5 ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန်
နော်မန်၏ဒေသပြင်သစ်၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်ဝေးပဲရစ်ကနေအတော်လေးတိုတောင်းခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမြောက်ပိုင်းပြင်သစ်၏အနှစ်သာရကိုခံစားချင်သောသူတို့၏အများအပြားများအတွက်ရေပန်းစားခရီးသွားဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. နော်မန်အားလုံးကရှိပါတယ်, တစ်ဦးအနေဖြင့် ကြွယ်ဝသောသမိုင်း ရက်စွဲများရာစုနှစ်များစွာ back ကြောင်း, ပိုပြီးလိုသောသင်စွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုအံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်လက်ရာမြောက်သောအစားအစာမှ. သို့သျောလညျး, နော်မန်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဗိသုကာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဒေသအမှန်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖမ်းယူကြောင်းရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့များ stunning မှနေရာဖြစ်သည်. အဆိုပါ သဘာဝအလှအပ ကွောကျရှံ့သောဤအလုပ်များမြို့များအရွက်နှင့်အတူ Blend အများအပြားကြောင်း. ဤအရုပ်ပုံ-စုံလင်သောနေရာများတွင်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်, တစ်ဦးကရထား Save များစာရင်းကိုအတူတူထား5နော်မန်အတွက်သွားရောက်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ရွာ. သူတို့အထဲ၌ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားပါ သင့်ရဲ့ခရီး သငျသညျခရီးသွားလာနေသောနောက်တစ်ကြိမ် ပြင်သစ်မှတဆင့်.
1. ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန်: Honfleur, Calvados
Honfleur ဤစာရင်းတွင်အပေါ်အကျော်ကြားဆုံးမြို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာသည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဆိပ်ကမ်းမြို့တော်သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး၎င်းအားကမ်းလှမ်းထားသမျှကိုနှစ်သက်ကြသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အရပ်ရှည်ရှည်အဘို့မူထူးခြားတဲ့နှင့်မှတ်မိဖြစ်ပါသည်, ကျဉ်းသော, နှင့်ရောင်စုံအဆောက်အဦးများ. ဒါဟာနှစ်ပေါင်းတစ်လျှောက်လုံးမြောက်မြားစွာအနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ထူးခြားသောနှင့်ရောင်စုံအဆောက်အဦးများမြောက်မြားစွာပန်းချီကားထဲမှာဖမ်းဆီးရမိပြီ. သင်တစ်ဦးလက်ရာသို့တိုးမြှင်တူသော Honfleur ၏လမ်းများမှတဆင့်တစ်ဦးကလမ်းလျှောက် feeling ကိုသင်ချန်ထားမည်. ဒါဟာခြောသငျသညျဗဒေပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါမြို့ကတဆင့်လာမယ့်ခရီးသွားဧည့်တွေအများကြီးရှိပြီးအရသာပင်လယ်စာကနေအရာအားလုံးကမ်းလှမ်း, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရန် ပြတိုက်. သငျသညျအစဉျအမွဲကဒီစိတ်ကူးမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့လျှင်, ယင်း၏ရှုခင်းနှင့်သမိုင်းအတွက်ယူ. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မြို့ရဲ့ဆိပ်ကမ်းကိုခံစားဖို့သေချာပါစေ, သော Vieux Bassin အဖြစ်လူသိများသည်. ဒါဟာနော်မန်အတွက်အကျော်ကြားဆုံးခရီးသွားနေရာများတို့တွင်. အဆိုပါဆိပ်ကမ်းအများအားဖြင့်စက်လှေများနှင့်ကုန်သွယ်ရေယာဉ်များငါးမျှားဖို့အိမျတခါခဲ့သည်. သို့သျောလညျး, နှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်မြောက်မြားစွာရွက်လှေအားနေအိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
Rouen Brest မှရထား
Rouen သည် Le Havre မှရထား
2. က Les Andelys, သင့်ရဲ့
က Les Andelys တစ် quintessential ပြင်သစ်မြို့မှာသင်လိုအပ်သမျှကိုဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါချစ်စရာကောင်းမြို့ Seine မြစ်ဘေးမှာဖြစ်ပါသည်. အဆင်းလှသောမြစ်ဖို့နီးကပ်အပြင်, က Les Andelys လည်းရှိပါတယ် ပါဝါစိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများ ပတ်လည်၌ရှိသောကျောက်ဖြူကျောက်ဆောင်တို့သည်ဖြူကြ၏. က Les Andelys ရုပ်ပုံ-စုံလင်သည်, များစွာသောဧည့်သည်များကဒီစိတ်ကူးမြို့၏ဓါတ်ပုံများကိုရာပေါင်းများစွာနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းဖမ်းယူရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်.
၎င်း၏လှပမှုအပြင်, က Les Andelys လည်း၎င်း၏ 12 ရာစုရဲတိုက်ဘို့ကျော်ကြား. အဆိုပါရဲတိုက်, Chateau Gaillard, တစ်ချိန်ကအိမ်မှာဖို့ဖြစ်တယ် ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart. ရဲတိုက်ယခုအပျက်အယွင်းရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, ယင်း၏အထင်ကြီးအရွယ်အစားနှင့်တည်ဆောက်ကျောက်ဖြီးတက်တောင်တက်မြင်ရမှနေဆဲ Impress ဧည့်သည်များ.
ပဲရစ်က Le Mance မှရထား
ပဲရစ် Brest မှရထား
သည် Le Havre Le Mans ရထားမှ
ပဲရစ် Nantes ရထားမှ
3. ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန်: Giverny, သင့်ရဲ့
Giverny အများဆုံး Claude Monet ရဲ့အိမျအတှကျလူသိများသည်. Claude Monet သူ့မိသားစုနှင့်အတူ 1880 ခုနှစ်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်း. နှစ်တွေကသူ၏ကံဇာတာပိုကောင်းဘို့အလှည့်, သူကပိုချမ်းသာကြွယ်ဝဖြစ်လာခဲ့သည်. နောက်ပိုင်းတွင်, သူသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူရန်နိုင်ခဲ့သည်, အဖြစ်ကောင်းစွာပတျဝနျးကငျြမြေများအချို့ကိုအဖြစ်. ပန်းချီကားရှိတစ်ဦးစတူဒီယို built နှင့်သူ၏အများကြီးဖန်တီး အလုပ် ကြောင်းအိမ်ခြံမြေအပေါ်, အရာမြေပုံပေါ်တွင် Giverny ထား. အပြင် Giverny အိမ်ရာကနေပန်းချီကားများ၏အကြိုက်, ဒါကြောင့်လည်းအခြားအ impressionist အနုပညာရှင်မှအိမ်ပြန်ခဲ့. ဤရွေ့ကား Claude Cambur ပါဝင်သည်, Christophe Demarez, နှင့် Ramier. ငွေရတတ်သောသူသမိုင်းကဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အနုပညာရှင်များဘဝနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ကြုံခံစားချင်သောအနုပညာချစ်သူများတွေအများကြီးထဲမှာဆွဲယူ.
မြို့ရဲ့အထင်ကြီးအနုပညာသမိုင်းအပြင်, မြို့ကိုလည်းယင်း၏ပါရှုခင်းအဘို့အကျော်ကြား. ဒါဟာအနုပညာရှင်တွေကြောင့်ကိုချစ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ထိုနေ့ကျက်သရေယနေ့မြောက်မြားစွာဧည့်သည်များအတွက်ဆွဲယူ. အဆိုပါချစ်စရာကောင်းတိုင်းပြည်အိမ်တွင်း, ပါဥယျာဉ်, နှင့်တက်ကြွသည့်သဘာဝ ambiance တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-မြင်ကြသည်. သငျသညျနော်မန်၏ Eure ဒေသတွင်း၌အစဉ်အမြဲတည်လျှင် Giverny အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ.
ပဲရစ်က Le Havre မှရထား
Le Mans ပဲရစ်ရထားမှ
4. Beuvron-my-Auge, Calvados
ဤသည်အံ့သြဖွယ်အနည်းငယ်သာမြို့ချေ dAuge ဒေသတွင်တည်ရှိသည်. အဆိုပါဒေသသည်၎င်း၏ liqueur နှင့်ဒိန်ခဲအဘို့အကျော်ကြား. ယင်းစိတ်ကူးအရသာဒေသတွင်းကမ်းလှမ်းမှုအပြင်, သင်သည်လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာမြို့များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်. ထိုဒေသတွင်အကျော်ကြားဆုံးမြို့များတစ်ခုမှာ Beuvron en Auge ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနေ့စွဲပြန် 1500 မှသမိုင်းဝင်နေရာအရပ်ရပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏. 16 ရာစုကနေထိုသို့သော Vieux manor အဖြစ်အဆောက်အအုံများ, 17 ရာစုကနေတစ်ဝက်ကျွန်းသစ်နေအိမ်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်, သငျသညျအခြိနျမှာပြန်ခရီးထွက်ကြကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေမည်. ယင်းချ Walking cobbled လမ်းများ Beuvron en Auge တစ်ခုနေ့လည်ခင်းဖြုန်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
Le Mans ရထားမှ Brest
Brest ရထားမှ Nantes
Le Mans Rennes ရထားမှ
Le Mans Rouen ရထားမှ
5. ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန်: Barfleur, အချို့သော
နော်မန် Cotentin ကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် Barfleur ၏လှပသောကမ်းရိုးတန်းမြို့တည်ရှိသည်. ခန့်သာဒီတိတ်ဆိတ်ငါးဖမ်းမြို့ 700 ဒေသခံများကအများဆုံးက၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှများအတွက်လူသိများသည်. ဒါဟာတရားဝင်ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးမြို့များကိုတစ်ဦးအဖြစ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်. ဒါဟာ Plus အား Beaux ကျေးရွာက de ပြင်သစ်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်, ထိုသို့အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ရှင်းပါတယ်.
Barfleur အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့သောကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်ပါတယ်. ပုံပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျယ်ပြန့်ပင်လယ်အမြင်အပြင်, ကအိမ်သို့လည်းဖြစ်ပါတယ် သမိုင်းဝင်ဗိသုကာ. ပထမဦးစွာ, လမ်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ cobbled နှင့်အတော်လေးဟောင်းနေကြတယ်. ဒုတိယအ, အတော်ကြာဟောင်းအိမ်တွေကိုပြန် 16 ရာစုမှယနေ့အထိ. မြို့ထဲတွင်အသက်အကြီးဆုံးအိမ်သူအိမ်သားအများကြီးနောက်ထပ်ထက်နောက်ကျောသွားသည်. သန့်ရှင်းသူကက်သရင်းထောင်ဝင်းထဲမှာ, သငျသညျရက်စွဲများအလယ်ခေတ်မှ back တဲ့အိမ်သူအိမ်သားမြင်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာတစ်ဦးဝင်ပေါက်ရှိပါတယ်, ပြင်ပလှေကား, နှင့် mullioned ပြတင်းပေါက်. Barfleur ငယ်လေးတစ်မြို့ဖြစ်သော်လည်း, ထိုသို့ တန်ဖိုးရှိတစ်ခရီးစဉ် သငျသညျထိုဒေသတွင်လျှင်.
Rennes ရထားမှ Brest
Nantes ရထားမှ Brest
လိုင်လီက Le Havre မှရထား
သည် Le Havre ရထားမှ Tours မှ
နော်မန်အတော်လေးကြီးမားသည်, ထိုသို့ရှိနေသော်လည်းမြောက်မြားစွာရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့များမှအိမ်ပြန်ဖြစ်ခြင်း, သူတို့တစ်ဦးစီမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုကွောကျရှံ့ဧည့်သည်များအရွက်ကြောင်း၎င်း၏အနှစ်သာရနှင့်ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်. သင်တို့သည်ဤမြို့ရွာ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, အဖြစ်အခြားအရာအားလုံးနော်မန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်, စာအုပ်တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် နှင့်သင့်ခရီးစတင်ပါ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်နော်မန်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-towns-visit-normandy%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Fairytaletowns frenchtowns နော်မန် ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelfrance traveltips